COVID-19 ဗိုငျးရပျဈ ဂယကျနဲ့ မွနျမာ့ဖရဲသခှားမှေး ဈေးကှကျ – Voice of Myanmar
COVID-19 ဗိုငျးရပျဈ ဂယကျနဲ့ မွနျမာ့ဖရဲသခှားမှေး ဈေးကှကျ
တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ ဟူပပွေညျနယျ၊ ဝူဟနျမွို့က စတငျဖွဈပှားခဲ့တဲ့ Corona Virus ရောဂါပိုးကူးစကျပြံ့နှံ့မှုကွောငျ့ တရုတျနိုငျငံတှငျး ပွညျနယျတဈခုနဲ့တဈခု၊ မွို့တဈခုနဲ့တဈခု ကူးလူးဆကျဆံမှုတှကေို ပိတျဆို့ဖွတျတောကျလိုကျပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ ကုနျသှယျမှုတှေ ရပျဆိုငျးသှားခဲ့ပွီး တရုတျနိုငျငံနဲ့ နယျစပျကုနျသှယျရေး ဆောငျရှကျလကျြရှိတဲ့ မူဆယျ၊ လှယျဂယျြ၊ ခငျြးရှဟေျော၊ ကနျပိုကျတီ ကုနျသှယျရေးစခနျးတှမှောလညျး ကုနျသှယျမှုလုပျငနျး အမြားစု ထိခိုကျနဈနာမှုတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။
နှဈစဉျ တရုတျနှဈသဈကူးကာလမှာ တရုတျ-မွနျမာ ကုနျသှယျမှု လြော့နညျးလရှေိ့ပမေယျ့ ၂၀၂၀ခုနှဈမှာတော့ Corona Virus ရောဂါပိုး စတငျကူးစကျမှုဟာ Global Economy အတိုငျးအတာအထိ သကျရောကျတာကွောငျ့ တရုတျ-မွနျမာ ကုနျသှယျမှုလုပျငနျးတှအေပျေါမှာလညျး သကျရောကျမှု မြားပွားခဲ့ပါတယျ။ ဒီသကျရောကျထဲမှာ မွနျမာ့ ဖရဲသခှားမှေး စိုကျပြိုးထုတျလုပျသူတှဟောလညျး နဈနာဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားရတဲ့ ပွညျသူတှထေဲ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
COVID-19 ဗိုငျးရပျဈ ဂယကျကွောငျ့ ပူလောငျခဲ့ရတဲ့ ဖရဲသခှားမှေးတောငျသူတှေ
အကွမျးဖဉျြးအားဖွငျ့ ဖရဲ၊ သခှားမှေး တဈဧကစိုကျပြိုးစရိတျက ကပျြသိနျး(၃၀)ကနေ (၄၅)သိနျးကပျြလောကျ ကုနျကပြွီး၊ ဖရဲသခှားစိုကျပြိုးရာ ဒသေတှကေနေ မူဆယျအထိ သယျယူပို့ဆောငျစရိတျကလညျး မနညျးပါဘူး။ “စဈကိုငျးတိုငျး၊ ဘုတလငျကနေ မူဆယျ (၁၀၅)မိုငျကှငျး အထိ ခရီးအကှာအဝေးအတိုငျး တှကျခကျြမယျဆိုရငျ (၁၂)ဘီးကားတဈစီးကို ကပျြ(၁၀)သိနျးကနေ (၁၅)သိနျး ဝနျးကငျြလောကျ ပေးရတယျ” လို့ စဈကိုငျးတိုငျးက ဖရဲစိုကျတောငျသူတဈဦးက ပွောပွပါတယျ။
အဲ့ဒီလို ကုနျကစြရိတျတှေ ရငျးနှီးထားရပွီး၊ စိုကျပြိုးတဲ့ မြိုးစအေ့လိုကျ ရကျပေါငျး (၆၅)ရကျနေ ရကျ(၉၀)လောကျ ဂရုတစိုကျ အခြိနျပေးစိုကျပြိုးထားရတဲ့ ဖရဲသခှားမှေးသီးနှံတှေ ဈေးထိုးကသြှားမှာလား? အဆငျပွပွေနေဲ့ ရောငျးခနြိုငျဖို့ ဘာလိုကွိုးစားကွမလဲ? ဆိုပွီး၊ COVID-19 ဗိုငျးရပျဈ ဂယကျကွောငျ့ တောငျသူတှေ ဗြာမြားခဲ့ကွပါတယျ။ အဓိက ဈေးကှကျဆိုလို့လညျး ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ မူဆယျကတဆငျ့ တရုတျနိုငျငံဈေးကှကျတဈခုကိုသာ အမှီပွုရောငျးခနြရေတာကိုး…။ ဒါတောငျမှ တရုတျပွညျ ဟှိုငျနနျကြှနျးမှာ ဖရဲသခှားပျေါခြိနျဆိုရငျ မွနျမာ့ဖရဲသခှားတှေ ဈေးကောငျးမရတာမြိုး၊ ဖရဲသခှားမှေး ဈေးက တဈနရှေ့ေ၊ တဈနငှေ့ေ ဖွဈတတျသလို တရုတျငှဈေေးအတကျအကပြျေါ မူတညျနတောမြိုးတှကေလညျး တောငျသူတှေ နှဈစဉျကွုံတှခေံ့စားရတဲ့ အခကျအခဲတှပေါ။
တရုတျဈေးကှကျကိုသာ အမှီပွုနမေယျ့အစား ပွညျတှငျးဈေးကှကျတိုးခြဲ့ပွီး၊ ပွညျပဈေးကှကျသဈတှေ ဖျောဆောငျဖို့အတှကျ မွနျမာ့ဖရဲသခှားမှေးပှဲတျော ၂၀၂၀ ကို ဖဖေျောဝါရီလ (၂၉)ရကျကနေ၊ မတျလ (၄)ရကျအထိ၊ ရနျကုနျတိုငျး၊ ဗဟနျးမွို့နယျ၊ ကနျတျောကွီး (ဆငျဖွူကြှနျးနှငျ့မွပေဒသောကြှနျး)မှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ကငျြးပခဲ့ကွပါတယျ။
စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာန၊ စိုကျပြိုးရေး၊မှေးမွူရေးနှငျ့ဆညျမွောငျး ဝနျကွီးဌာန၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့တို့ရဲ့ ကူညီမှုတှနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံကုနျသညျမြားနှငျ့ စကျမှုလကျမှု လုပျငနျးရှငျမြား အဖှဲ့ခြုပျ(UMFCCI)က ပါဝငျပံ့ပိုးပွီး၊ မွနျမာနိုငျငံ သဈသီးဝလံနှငျ့ပနျးမနျ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ စိုကျပြိုးထုတျလုပျတငျပို့ရောငျးခသြူမြားအသငျး(MFVP)၊ မွနျမာနိုငျငံ ဖရဲ၊သခှားမှေး စိုကျပြိုးထုတျလုပျတငျပို့ ရောငျးခသြူမြားအသငျးတို့က ဦးဆောငျစီစဉျခဲ့တာပါ။
ဖရဲသခှားမှေးကို ပုံမှနျစားသုံးနကွေပုံစံအပွငျ၊ ဟငျးအဖွဈ ခကျြပွုတျလာနိုငျအောငျ လကျတှေ့ ခကျြပွုတျပွတာတှေ၊ သီးစုံအရောဖြျောရညျလုပျပွတာတှေ၊ သဈသီးအလှဆငျပုံဖျောပွိုငျပှဲ၊ အခြိုပှဲပွငျပွိုငျပှဲ၊ ဖရဲပေါကျပှဲတျော စတဲ့ ပြျောစရာအစီအစဉျတှနေဲ့ ဖရဲသခှားမှေး စားသုံးမှုပိုမြားလာအောငျ ရနျကုနျလူထုရဲ့အမွငျကို ဆှဲဆောငျခဲ့ကွပါတယျ။
“အဓိကကတော့ COVID-19 ဗိုငျးရပျဈ ဂယကျကွောငျ့ သောကဖွဈနရေတဲ့ တောငျသူတှအေတှကျ ဈေးကှကျသဈတှေ ရလာဖို့ပါ။ ပွညျပကိုခညျြး အားမကိုးရအောငျနဲ့ ပွညျတှငျးဈေးကှကျတှေ ဖျောဆောငျပေးခငျြတာကွောငျ့ပါ။ ပထမအကွိမျ ဖရဲသခှားပှဲတျောလေး လုပျခဲ့တာ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဒညငျးကုနျးဈေးမှာ ဆိုငျခနျးတှဖှေငျ့ပွီး တောငျသူတှေ ရောငျးခနြိုငျအောငျလညျး စီစဉျပေးနပေါပွီ။ တောငျသူနဲ့ ဝယျယူစားသုံးသူ တိုကျရိုကျရောငျးခြ သှားနိုငျဖို့ အတှကျပါ။ ဖရဲသီးကို အခွောကျခံတာ၊ စညျသှပျတာ၊ ဖြျောရညျထုတျတာ စတဲ့ တနျဖိုးမွှငျ့ထုတျကုနျတှကေိုလညျး စတငျ စမျးသပျထုတျလုပျနပေါပွီ။” လို့ မွနျမာနိုငျငံ ဖရဲသခှားမှေး စိုကျပြိုးထုတျလုပျတငျပို့ရောငျးသူမြားအသငျး ဥက်ကဌ ဦးနိုငျဝငျးက ပွောဆိုပါတယျ။
မတျလအလယျက ဖရဲသခှားမှေး မြှျောလငျ့ခကျြရောငျခွညျ..
ဘယျလိုအခကျအခဲကွုံလာလာ၊ ထုသားပသေားကပြွီးသား မွနျမာတောငျသူတှကေတော့ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလတဈလလုံးလညျး ရငျတထိတျထိတျနဲ့ပဲ..။ မတျလမှာ COVID-19 ဗိုငျးရပျဈ ဂယကျကွောငျ့ သတေဲ့သူ စာရငျးတှကေို အှနျလိုငျးက မွငျရ ကွားရပမေယျ့လညျး ထှကျနတေဲ့ ဖရဲသခှားမှေးတှကေို မရောငျးလို့ကလညျး မဖွဈတော့ ရှုံးခါမှ ရှုံးရော၊ ရောဂါ ကူးခါမှကူးရော မူဆယျတကျလာတဲ့ကားတှလေညျး တကျလာကွ၊ အသီးမခူးသေးပဲ ခဏထားပွီး၊ ဈေးကှကျကို စနညျးနာသူတှလေညျး နာကွဆဲပါ။
“တရုတျအစိုးရက ပွညျပထှကျ တရုတျနိုငျငံသားတှေ ပွနျဝငျလာရငျ (၁၄)ရကျစောငျ့ကွညျ့မယျ ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတှေ ၁၇ ရကျနကေ့ ထှကျခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒီကောလဟာလကွောငျ့ တရုတျတှကေ မဝယျတော့ပဲ ပွနျကုနျတယျ။ ဖရဲကားတှကေ တရုတျဝယျလကျတှနေောကျကို လိုကျရောငျးနရေတော့ မနကေ့တဈရကျလုံး ဒုက်ခရောကျသှားတာပါ။ ဒီနတေ့ော့ ပုံမှနျအတိုငျး ပွနျရောငျးခနြပေါပွီ။ လူစုလူဝေး မဖွဈအောငျတော့ ကွငွောခကျြထုတျထားပါတယျ။” လို့ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီးက ဖရဲစိုကျတောငျသူ ကိုဖိုးလုံးက ပွောပါတယျ။
COVID-19 ဗိုငျးရပျဈကို ကွိုတငျကာကှယျဖို့၊ (၁၀၅)မိုငျ သဈသီးရောငျးကှငျးမှာ ဝငျရောကျရောငျးခနြတေဲ့ ကုနျသညျတှေ မူဆယျဂိတျကို ကြျောလှနျပွီး အရောငျးကှငျးထဲ မဝငျဖို့ မူဆယျ၊ သဈသီးဝလံကုနျစညျဒိုငျမှ ကွညောခကျြတဈရပျကို မတျလ(၁၈)ရကျက ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ လူစုလူဝေးဖွဈခွငျးကို လြော့ခနြိုငျစဖေို့ အတှကျ ဝယျလကျမြား၊ ပှဲရုံပှဲစားမြား၊ ဖရဲသခှားတငျကားသမားမြား၊ တာဝနျရှိသူဝနျထမျးမြား၊ အေးဂငျြ့မြားမှအပ ဂိတျတံခါးကို ကြျောလှနျပွီး အရောငျးကှငျးစငျပျေါကို တကျရောကျခှငျ့မပွုတော့တာ ဖွဈပါတယျ။
“တရုတျအစိုးရကနေ သူ့ပွညျတှငျးက လူတှကေို ပွညျပထှကျခှာတာတို့ လယြောဉျခရီးစဉျတို့ကို ပိတျထားတာ။ နယျစပျဝငျထှကျပွီး၊ အသီးရောငျးဝယျတာကိုတော့ ယူနနျပွညျနယျအစိုးရက ဖွလြေော့ပေးလိုကျပါတယျ။ တောငျသူတှကေို ဖရဲအရောငျးစငျပျေါ မတကျခိုငျးတာကတော့ ရောဂါကာကှယျမှု အားနညျးတာကွောငျ့ ကူးစကျပွနျ့ပှားမှာ စိုးရိမျလို့ပါ။ တရုတျနိုငျငံ အနနေဲ့လညျး ရောဂါကာကှယျမှုတှေ လုပျဆောငျနတောမို့၊ မတျလအလယျမှာ မြှျောလငျ့ခကျြပွနျရှိလာပါတယျ။ ဖရဲ၊သခှားမှေး ဝယျလိုအား ပွနျမြားလာပါတယျ။” လို့ မူဆယျ၊ သဈသီးဝလံကုနျစညျဒိုငျ ဒုတိယဥက်ကဌ ဦးစိုငျးခငျမောငျက ဆိုပါတယျ။
COVID-19 ဗိုငျးရပျဈပိုးဟာ ကမ်ဘာ့အတိုငျးအတာနဲ့ ဖွဈပှားနတေဲ့ ကူးစကျရောဂါပိုးတဈခုဖွဈတာမို့ ဒီရောဂါပိုး ကူးစကျပွနျပှားမှု တညျငွိမျတာနဲ့အမြှ မွနျမာ့ဖရဲသခှားမှေးဈေးကှကျဟာလညျး မြှျောလငျ့ရောငျခွညျလေးတှေ ပွနျသနျးလာမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၂၀ခုနှဈ၊ မတျလ(၁၉)ရကျနမှေ့ာတော့ မွနျမာ့ဖရဲ၊သခှားမှေး ကားအစီးရေ (၃၅၀)ကြျောကို မူဆယျကနေ တရုတျပွညျဈေးကှကျကို တငျပို့ရောငျးခနြိုငျခဲ့တယျလို့ မူဆယျ၊ သဈသီးဝလံကုနျစညျဒိုငျရဲ့ စာရငျးတှကေနေ သိရှိရပါတယျ။
#voiceofmyanmar #VOM #ဖရဲသခှါးမှေး
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ဂယက်နဲ့ မြန်မာ့ဖရဲသခွားမွှေး ဈေးကွက်
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟူပေပြည်နယ်၊ ဝူဟန်မြို့က စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Corona Virus ရောဂါပိုးကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင်း ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု၊ မြို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကူးလူးဆက်ဆံမှုတွေကို ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ မူဆယ်၊ လွယ်ဂျယ်၊ ချင်းရွေဟော်၊ ကန်ပိုက်တီ ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေမှာလည်း ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်း အများစု ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
နှစ်စဉ် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကာလမှာ တရုတ်-မြန်မာ ကုန်သွယ်မှု လျော့နည်းလေ့ရှိပေမယ့် ၂၀၂၀ခုနှစ်မှာတော့ Corona Virus ရောဂါပိုး စတင်ကူးစက်မှုဟာ Global Economy အတိုင်းအတာအထိ သက်ရောက်တာကြောင့် တရုတ်-မြန်မာ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်မှု များပြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီသက်ရောက်ထဲမှာ မြန်မာ့ ဖရဲသခွားမွှေး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေဟာလည်း နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားရတဲ့ ပြည်သူတွေထဲ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ဂယက်ကြောင့် ပူလောင်ခဲ့ရတဲ့ ဖရဲသခွားမွှေးတောင်သူတွေ
အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် ဖရဲ၊ သခွားမွှေး တစ်ဧကစိုက်ပျိုးစရိတ်က ကျပ်သိန်း(၃၀)ကနေ (၄၅)သိန်းကျပ်လောက် ကုန်ကျပြီး၊ ဖရဲသခွားစိုက်ပျိုးရာ ဒေသတွေကနေ မူဆယ်အထိ သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်ကလည်း မနည်းပါဘူး။ “စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဘုတလင်ကနေ မူဆယ် (၁၀၅)မိုင်ကွင်း အထိ ခရီးအကွာအဝေးအတိုင်း တွက်ချက်မယ်ဆိုရင် (၁၂)ဘီးကားတစ်စီးကို ကျပ်(၁၀)သိန်းကနေ (၁၅)သိန်း ၀န်းကျင်လောက် ပေးရတယ်” လို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းက ဖရဲစိုက်တောင်သူတစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ကုန်ကျစရိတ်တွေ ရင်းနှီးထားရပြီး၊ စိုက်ပျိုးတဲ့ မျိုးစေ့အလိုက် ရက်ပေါင်း (၆၅)ရက်နေ ရက်(၉၀)လောက် ဂရုတစိုက် အချိန်ပေးစိုက်ပျိုးထားရတဲ့ ဖရဲသခွားမွှေးသီးနှံတွေ ဈေးထိုးကျသွားမှာလား? အဆင်ပြေပြေနဲ့ ရောင်းချနိုင်ဖို့ ဘာလိုကြိုးစားကြမလဲ? ဆိုပြီး၊ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ဂယက်ကြောင့် တောင်သူတွေ ဗျာများခဲ့ကြပါတယ်။ အဓိက ဈေးကွက်ဆိုလို့လည်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မူဆယ်ကတဆင့် တရုတ်နိုင်ငံဈေးကွက်တစ်ခုကိုသာ အမှီပြုရောင်းချနေရတာကိုး…။ ဒါတောင်မှ တရုတ်ပြည် ဟွိုင်နန်ကျွန်းမှာ ဖရဲသခွားပေါ်ချိန်ဆိုရင် မြန်မာ့ဖရဲသခွားတွေ ဈေးကောင်းမရတာမျိုး၊ ဖရဲသခွားမွှေး ဈေးက တစ်နေ့ရွေ၊ တစ်နေ့ငွေ ဖြစ်တတ်သလို တရုတ်ငွေဈေးအတက်အကျပေါ် မူတည်နေတာမျိုးတွေကလည်း တောင်သူတွေ နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ခံစားရတဲ့ အခက်အခဲတွေပါ။
တရုတ်ဈေးကွက်ကိုသာ အမှီပြုနေမယ့်အစား ပြည်တွင်းဈေးကွက်တိုးချဲ့ပြီး၊ ပြည်ပဈေးကွက်သစ်တွေ ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက် မြန်မာ့ဖရဲသခွားမွှေးပွဲတော် ၂၀၂၀ ကို ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၉)ရက်ကနေ၊ မတ်လ (၄)ရက်အထိ၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကန်တော်ကြီး (ဆင်ဖြူကျွန်းနှင့်မြေပဒေသာကျွန်း)မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ၀န်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တို့ရဲ့ ကူညီမှုတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့ချုပ်(UMFCCI)က ပါဝင်ပံ့ပိုးပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်သီးဝလံနှင့်ပန်းမန်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း(MFVP)၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဖရဲ၊သခွားမွှေး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချသူများအသင်းတို့က ဦးဆောင်စီစဉ်ခဲ့တာပါ။
ဖရဲသခွားမွှေးကို ပုံမှန်စားသုံးနေကြပုံစံအပြင်၊ ဟင်းအဖြစ် ချက်ပြုတ်လာနိုင်အောင် လက်တွေ့ ချက်ပြုတ်ပြတာတွေ၊ သီးစုံအရောဖျော်ရည်လုပ်ပြတာတွေ၊ သစ်သီးအလှဆင်ပုံဖော်ပြိုင်ပွဲ၊ အချိုပွဲပြင်ပြိုင်ပွဲ၊ ဖရဲပေါက်ပွဲတော် စတဲ့ ပျော်စရာအစီအစဉ်တွေနဲ့ ဖရဲသခွားမွှေး စားသုံးမှုပိုများလာအောင် ရန်ကုန်လူထုရဲ့အမြင်ကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
“အဓိကကတော့ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ဂယက်ကြောင့် သောကဖြစ်နေရတဲ့ တောင်သူတွေအတွက် ဈေးကွက်သစ်တွေ ရလာဖို့ပါ။ ပြည်ပကိုချည်း အားမကိုးရအောင်နဲ့ ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွေ ဖော်ဆောင်ပေးချင်တာကြောင့်ပါ။ ပထမအကြိမ် ဖရဲသခွားပွဲတော်လေး လုပ်ခဲ့တာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒညင်းကုန်းဈေးမှာ ဆိုင်ခန်းတွေဖွင့်ပြီး တောင်သူတွေ ရောင်းချနိုင်အောင်လည်း စီစဉ်ပေးနေပါပြီ။ တောင်သူနဲ့ ၀ယ်ယူစားသုံးသူ တိုက်ရိုက်ရောင်းချ သွားနိုင်ဖို့ အတွက်ပါ။ ဖရဲသီးကို အခြောက်ခံတာ၊ စည်သွပ်တာ၊ ဖျော်ရည်ထုတ်တာ စတဲ့ တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်တွေကိုလည်း စတင် စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေပါပြီ။” လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဖရဲသခွားမွှေး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းသူများအသင်း ဥက္ကဌ ဦးနိုင်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
မတ်လအလယ်က ဖရဲသခွားမွှေး မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်..
ဘယ်လိုအခက်အခဲကြုံလာလာ၊ ထုသားပေသားကျပြီးသား မြန်မာတောင်သူတွေကတော့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတစ်လလုံးလည်း ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပဲ..။ မတ်လမှာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ဂယက်ကြောင့် သေတဲ့သူ စာရင်းတွေကို အွန်လိုင်းက မြင်ရ ကြားရပေမယ့်လည်း ထွက်နေတဲ့ ဖရဲသခွားမွှေးတွေကို မရောင်းလို့ကလည်း မဖြစ်တော့ ရှုံးခါမှ ရှုံးရော၊ ရောဂါ ကူးခါမှကူးရော မူဆယ်တက်လာတဲ့ကားတွေလည်း တက်လာကြ၊ အသီးမခူးသေးပဲ ခဏထားပြီး၊ ဈေးကွက်ကို စနည်းနာသူတွေလည်း နာကြဆဲပါ။
“တရုတ်အစိုးရက ပြည်ပထွက် တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ပြန်ဝင်လာရင် (၁၄)ရက်စောင့်ကြည့်မယ် ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတွေ ၁၇ ရက်နေ့က ထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီကောလဟာလကြောင့် တရုတ်တွေက မ၀ယ်တော့ပဲ ပြန်ကုန်တယ်။ ဖရဲကားတွေက တရုတ်ဝယ်လက်တွေနောက်ကို လိုက်ရောင်းနေရတော့ မနေ့ကတစ်ရက်လုံး ဒုက္ခရောက်သွားတာပါ။ ဒီနေ့တော့ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ရောင်းချနေပါပြီ။ လူစုလူဝေး မဖြစ်အောင်တော့ ကြေငြာချက်ထုတ်ထားပါတယ်။” လို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးက ဖရဲစိုက်တောင်သူ ကိုဖိုးလုံးက ပြောပါတယ်။
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့၊ (၁၀၅)မိုင် သစ်သီးရောင်းကွင်းမှာ ဝင်ရောက်ရောင်းချနေတဲ့ ကုန်သည်တွေ မူဆယ်ဂိတ်ကို ကျော်လွန်ပြီး အရောင်းကွင်းထဲ မဝင်ဖို့ မူဆယ်၊ သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင်မှ ကြေညာချက်တစ်ရပ်ကို မတ်လ(၁၈)ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ လူစုလူဝေးဖြစ်ခြင်းကို လျော့ချနိုင်စေဖို့ အတွက် ၀ယ်လက်များ၊ ပွဲရုံပွဲစားများ၊ ဖရဲသခွားတင်ကားသမားများ၊ တာဝန်ရှိသူဝန်ထမ်းများ၊ အေးဂျင့်များမှအပ ဂိတ်တံခါးကို ကျော်လွန်ပြီး အရောင်းကွင်းစင်ပေါ်ကို တက်ရောက်ခွင့်မပြုတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“တရုတ်အစိုးရကနေ သူ့ပြည်တွင်းက လူတွေကို ပြည်ပထွက်ခွာတာတို့ လေယျာဉ်ခရီးစဉ်တို့ကို ပိတ်ထားတာ။ နယ်စပ်ဝင်ထွက်ပြီး၊ အသီးရောင်းဝယ်တာကိုတော့ ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရက ဖြေလျော့ပေးလိုက်ပါတယ်။ တောင်သူတွေကို ဖရဲအရောင်းစင်ပေါ် မတက်ခိုင်းတာကတော့ ရောဂါကာကွယ်မှု အားနည်းတာကြောင့် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှာ စိုးရိမ်လို့ပါ။ တရုတ်နိုင်ငံ အနေနဲ့လည်း ရောဂါကာကွယ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတာမို့၊ မတ်လအလယ်မှာ မျှော်လင့်ချက်ပြန်ရှိလာပါတယ်။ ဖရဲ၊သခွားမွှေး ၀ယ်လိုအား ပြန်များလာပါတယ်။” လို့ မူဆယ်၊ သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးစိုင်းခင်မောင်က ဆိုပါတယ်။
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ ကမ္ဘာ့အတိုင်းအတာနဲ့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကူးစက်ရောဂါပိုးတစ်ခုဖြစ်တာမို့ ဒီရောဂါပိုး ကူးစက်ပြန်ပွားမှု တည်ငြိမ်တာနဲ့အမျှ မြန်မာ့ဖရဲသခွားမွှေးဈေးကွက်ဟာလည်း မျှော်လင့်ရောင်ခြည်လေးတွေ ပြန်သန်းလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၀ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၉)ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာ့ဖရဲ၊သခွားမွှေး ကားအစီးရေ (၃၅၀)ကျော်ကို မူဆယ်ကနေ တရုတ်ပြည်ဈေးကွက်ကို တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ မူဆယ်၊ သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင်ရဲ့ စာရင်းတွေကနေ သိရှိရပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #ဖရဲသခွါးမွှေး
စီးပှားရေး, ဆောငျးပါး, သတငျး